Firecracker, chaiyo muchina chekutarisa kubva kuAmazon | Linux Addicts
Firecracker, chaiyo muchina chekutarisa kubva kuAmazon
Amazon yakazivisa kuburitswa kweFirecracker 1.0, zvinova a virtual machine monitor (VMM, Virtual Machine Monitor), yakagadzirirwa kumhanyisa machina ane mashoma pamusoro. Firecracker ndizvo forogo yeprojekti yeCrosVM inoshandiswa neGoogle kumhanya Linux uye Android apps paChromeOS.
Amazon Web Services iri kugadzira Firecracker yekuvandudza mashandiro uye kugona kweiyo AWS Lambda uye AWS Fargate mapuratifomu.
1 About Firecracker
1.1 Maitiro ekuunganidza firecracker paLinux?
Kune avo vasingazive Firecracker, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi inopa lightweight virtual machines inonzi microVMs. Iyo yakazara yega yega microVM inoshandisa hardware virtualization technologies yakavakirwa paKVM hypervisor, uku uchichengetedza kuita uye kuchinjika kwemidziyo yakajairika.
Iyo system inowanikwa kune x86_64 uye ARM64 zvivakwa uye yakaedzwa paIntel Skylake, Intel Cascade Lake, AMD Zen2 uye ARM64 Neoverse N1 CPU mhuri, pamwe nemidziyo inopihwa kubatanidza Firecracker mukati menguva yekumhanya yemidziyo yekuzvimiririra masisitimu akadai seKata Containers, Weaveworks Ignite uye mumidziyo (yakapihwa nefirecracker- containerd runtime).
Iyo software nharaunda inomhanya mukati meiyo chaiyo muchina yakaderedzwa uye ine chete shoma seti yezvikamu. Kuchengetedza ndangariro, kuderedza nguva yekutanga, uye kugadzirisa kuchengetedzeka munzvimbo, Linux kernel yakareruka inoburitswa (mune kernels 4.14 uye 5.10 inotsigirwa), kubva izvo zvese zvisina basa hazvibatanidzwe, kusanganisira kuderedzwa kwekuita uye kutsigirwa kwemidziyo yakadzimwa.
Paunenge uchimhanya ne truncated kernel, iyo yekuwedzera ndangariro kushandiswa kana ichienzaniswa nemudziyo isingasviki 5MB. Iyo latency kubva pakutanga kweiyo microVM kusvika pakutanga kwekushandisa application yakaiswa pakati pe6 ne60 ms. (avhareji 12ms), zvichibvumira michina mitsva yemagetsi kuti iburitswe munzvimbo dzinosvika zana nemakumi masere pasekondi pamunhu ane makumi matatu nematanhatu cores.
Kugadzirisa virtual environments yenzvimbo yemushandisi, inomhanyisa maitiro ekumashure Virtual Machine Maneja, iyo inopa RESTful API iyo inoshandisa mabasa akadai sekugadzirisa, kutanga uye kumisa microVM, kusarudza CPU templates (C3 kana T2), kutarisa nhamba yemapurogiramu chaiwo (vCPUs) uye saizi yekuyeuka, kuwedzera network interfaces uye disk partitions, kuseta miganhu pabandwidth uye kusimba kwe. kushanda, kupa imwe ndangariro uye CPU simba kana paine kushomeka kwezviwanikwa.
Firecracker inoshandiswa ne/yakabatanidzwa ne: appfleet, yakachengetwa kuburikidza ne firecracker-containerd, Fly.io, Kata Containers, Koyeb, Northflank, OpenNebula, Qovery, UniK, uye Weave FireKube.
Zvakare nekushandiswa seyakadzama layer ye insulation yemidziyo, Firecracker yakakodzerawo kupa FaaS masisitimu (Basa seSevhisi), iyo inopa serverless komputa modhi, umo budiriro inoitwa padanho rekugadzirira seti yediki mabasa ega, rimwe nerimwe rinopa kugadziridzwa kwechimwe chiitiko uye rakagadzirirwa kushanda yakazvimirira pasina. chirevo chezvakatipoteredza (isina chimiro, mhedzisiro haibvi pane yakapfuura mamiriro uye zviri mukati mefaira system).
Mabasa anoshanda chete paanenge achidiwa, uye pakarepo mushure mekunge chiitiko chagadziriswa, vanopedza basa ravo. Iyo FaaS chikuva pachayo inobata mabasa akapihwa, inoronga manejimendi, uye inopa scalability yenzvimbo dzinodiwa kuita mabasa akagoverwa.
Maitiro ekuunganidza firecracker paLinux?
Kuna Lavo vanofarira kukwanisa kuedza firecracker pane yavo system, vanokwanisa kuiunganidza voga.
Nokuda kweizvi ingovhura terminal uye Chinhu chekutanga chavanofanira kuita kuwana iyo kodhi kodhi kuti vakwanise kuunganidza, izvi anogona kuita nekunyora:
Kana izvi zvangoitwa tinogona kupinda mufirecracker folda ne:
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve Firecracker, unogona kutarisa ruzivo pa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Firecracker, chaiyo muchina chekutarisa kubva kuAmazon
Raspberry Pi OS 64-bit ikozvino yave kuwanikwa seyakagadzika vhezheni
LMDE 5 budiriro yakatanga muna Ndira, uye ichagamuchira Linux Mint 20.3 maficha